ဖုန်းအတွက် မော်ဒယ်စုံ ဖောင့် | Firmware~~tool ~app နှင့် hardware အစုံအလင်
Description: Andorid devices Fonts and Keyboards installer By ALi Computer
G610-U00 plus V100R001CHNC17B914 KoPhyo Myanmar Font Build.rar
MPPG font Tool.apk
Description: Samsung (2016) ဖုန်းများအတွက် မြန်မာဖောင့် ထည့်သွင်းနည်း 2016 ခုနှစ်ထွက် (j1(2016),j3(2016),A5(2016),A7(2016),A3(2016) စတဲ့ဖုန်းများအားလုံးကို Root မပြုလုပ်ပဲ မြန်မာစာထည့်သွင်းလို့ရပါမယ်ခင်ဗျာ။သတိထားရမဲ့ အချက်တခုကတော့ မိမိကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ ဖုန်းဟာ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံထုတ် ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီး ဖုန်းအတွင်း official Unicode(မြန်မာ) နှင့် zawgyi(မြန်မာ) ဖောင့်များ ပါဝင်မှသာလျှင် ထည့်သွင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ့..နောက်ပိုင်းထွက် samsung ဖုန်းတော်တော်များဟာ Android version 5.0 and 5.1.1 များနဲ့လာတာများပါတယ်ခင်ဗျာ…အဒီအခါမှာ ကျနော်တို့ အရင်တုန်းက သုံးနေကျ ဖောင့်ချိန်ချာများနဲ့ ချိန်းတဲ့အခါမှာ upsupported ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်……………………………………………………… လိုအပ်တဲ့ ဖောင့်ချိန်ချာများကိုအောက်မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ……အရင်ဆုံး ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ အပလီကေးရှင်း ၂ ခုလုံးကို အင်စတောတင်ပါ..ဇော်ဂျီ ဖလစ်ဖောင့်ထဲ ကို ၀င်ပြီးတော့ ဖောင့်စတိုင်ကို default မှာထားပြီး home key နဲ့ ပြန်ထွက်လိုက်ပါခင်ဗျာ…ပြီးရင် ဖုန်းစက်တင်ထဲ့ language ထဲကိုဝင်ပြီး zawgyi(မြန်မာ)ကိုရွေးပေးပါ..အလိုဆိုရင် ဖုန်းရဲ့ system language တခုလုံးက မြန်မာဖောင့်ဖြစ်သွားပါမယ်ခင်ဗျာ…. ပြီးတဲ့ခါ ညာဘက်ထောင့်က ဆက်သွားရန်ကို နှိပ်ပြီး Unicode(မြန်မာ)ကိုရွေးပေး ပါခင်ဗျာ..နောက်တကြိမ် ဆက်သွားရန်ကို နှိပ်ပြီး zawgyi(မြန်မာ)ကိုရွေး ပြီး home key နဲ့ပြန်ထွက်လိုက်ပါ…..နောက်ပြီး ဇော်ဂျီ ဖလစ်ဖောင့်ထဲကို ပြန်ဝင်ပါ..ကျနော် တို့ ခုနက default မှာထားခဲ့တဲ့ ဖောင့်စတိုင်ကို zawgyi one T5(Ifont) ကိုရွေး ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ……..ဒါဆိုရင်တော့ မြန်မာဖောင့်သုံးလို့ရပါပြီခင်ဗျာ…browser မှာလည်း ဇော်ဂျီဖောင့်နဲ့ ရေးထားတဲ့စာတွေ ကို အမှန်အတိုင်းမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ…..အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်မှာ..ပုံတွေနှင့်တကွ ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ…..မြှားပြတဲ့အတိုင်းလေးပဲလုပ်ဆောင်သွားရင်ရပါပြီ ခင်ဗျာ……..သိပြီးသားသူများတော့မပါဘူးပေါ့ခင်ဗျာ……..
Description: Lolipop Zawgyi Font Installer v4.5 ယူနိုင်ပါပြီဗျာ.... Unicode ကို restore လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ apkလေး ကိုပါ auto install လုပ်ပေးမှာ
Description: Samsung myanmar font 5.x.x ************************************** Samsung ဖုန်းတွေ Version 5.1.1 ကနေစပြီး တစ်ချို့ဗားရှင်းအမြင့်တွေ Font Style ကနေ မြန်မာဖောင့်ချိန်မရတော့ပဲ Uninstall ပဲ တောင်းနေတဲ့ ပြသနာတွေ ရှိလာပါတယ် ။ ထိုပြသနာကို ဖြေရှင်းနိုင် ဖောင့်ချိန်းနိုင်တဲ့ HiFont ဆော့ဝဲကို Play Store ကနေ အင်စတောလုပ်လိုက်ပါ ( Root ရှိရန် လုံးဝ လုံးဝ မလိုအပ်ပါဘူး ) အင်စတောလုပ်ပြီးတာနဲ့ မိမိဖုန်းထဲမှာ Easy Apply ဆိုတဲ့ Shortcut လေးပေါ်နေတာကို တွေ့ရမယ် ။ ထို Easy Apply ထဲကိုဝင်၍ မိမိချိန်းလိုသောဖောင့်ကို ရွေးချိန်းနိုင်ပါတယ် ။ Facebook မှာလဲ မြန်မာစာမှန်ပါတယ် Browser မှာ မှန်ဖို့အတွက်ကတော့... Firefox Browser သို့မဟုတ် Free Adblocker Browser ကိုအသုံးပြုပါ ။ ပြီးနောက် Browser ထဲက Add Ons မှာ Tagu ကို အင်စတောလုပ်ပေးလိုက်ပါ ။ Zawgyi ရော Unicode ရော နှစ်မျိုးလုံး 100% အမှန်မြင်ရပါမယ် Download HiFont - Cool Font Text Free 5.4.9 Latest Version APK File App Name: HiFont - Cool Font Text Free 5.4.9 Package Name: com.xinmei365.font Category: Personalization Developer : Hi Fonts Version: 5.4.9 Publish Date: March 10, 2016 File Size: 6.6M Installs: 10,000,000 - 50,000,000 Requires Android: 3.2 and up Content Rating: Everyone Developer: Email john.papassa@gmail.com
Description: မြန်မာ font ထည့်ရင်း Logo မှာပဲရပ်ပြီး boot_loop ဖြစ်နေရင် - ဖုန်းကို Reset မချပါနဲ့။ - Driver သိနေသေးရင်အောက်က tool ကိုဖွင့်ပြီး fix လုပ်ပေးပါ။ font ပြင်ရင်း error ဖြစ်နေတဲ့ xml file တွေကိုဖျက်ပြီး ဖုန်းကို reboot ချပေးပါလိမ့်မယ်။ ပြန်တတ်လာရင် ခဏစောင့်ပါ။ Firmware ပြန်တင်စရာမလိုပဲ Lock screen လေးကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။
Description: Lollipop_5.0 Version နှင့်အထက် Zawgyi Font ထည့်သွင်းဖို့ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Coc font ပါ တပါတည်းထည့်သွင်းပေးမှာပါ။
Description: ASUS Zenfone2ကို Root ဖေါက်ပြီး မြန်မာ Font သွင်းနည်း ASUS_Android_USB_drivers_for_Windows_20150212.zip, Size 8.28 MB. CWM_Zenfone_2_Intel.zip, Size 10.44 MB... HTC_smartghost(2).zip, Size 9.03 MB...
Description: Myanmar Font ကို Command နဲ့ ထည့်တဲ့ နည်း လူတိုင်းသိပြီးသားနေမှာပါ ။ adb push zawgyi.ttf /data/local/tmp/zawgyi.ttf ကွန်ပျူတာထဲက zawgyi.ttf ကို ဖုန်းထဲက tmp folder ထဲကိုပို့လိုက်တယ် adb shell shell Command တွေသုံးဖို့ android ရဲ့ shell ထဲဝင်လိုက်တယ် ။ su root access ယူလိုက်တယ်။ mount -o remount ,rw /system android ရဲ့ system partition ကို rw (read/write) ရအောင် mount လိုက်တယ် ။ dd if=/data/local/tmp/zawgyi.ttf of=/system/fonts/Roboto-Regular.ttf tmp ထဲက zawgyi.ttf ကို font ဖိုဒါထဲကို Roboto-Regular.ttf ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ dding clone ရိုက်လိုက်တယ် ။ chmod 644 /system/fonts/*.ttf fonts ဖိုဒါထဲက .ttf နဲ့ ဆုံးတဲ့ ဖိုင်တိုင်းကို permission rw-r-r ပေးလိုက်တယ် ------------------------------------------------------------------------------ အပေါ်ကနည်းလမ်းက မြန်မာဖောင့်ကို system font ဖြစ်တဲ့ Roboto-Regular.ttf နဲ့ အစားထိုးလိုက်တဲ့ သမရိုးကျ နည်းလမ်းပါ ။ Android Version 4.0 နဲ့ အထက်ဖုန်းတိုင်းမှာ အဆင်ပြေပါတယ် ။ (COC မှာပါ မြန်မာဖောင့် မြင်ရပါတယ် ) ဒါပေမယ့် တစ်ခုရှိတာက နဂိုရ် Unicode ပါလာတဲ့ ဖုန်းတွေမှာ Roboto-Regular.ttf နဲ့ အစားထိုးရင် နေရာတိုင်းမှာ မမြင်နိုင်ပါဘူး . နဂိုရ် ပါလာတဲ့ Unicode ကို တစ်ခုမကျန် ဖျက်ပြီး သူ့နေရာမှာ အစားထိုးမှ zawgyi ကို နေရာတိုင်းမှာ မြင်ရမှာပါ ။ နဂိုရ်ပါလာတဲ့ Unicode တွေကို ဘယ်လိုရှာမလဲ ။ ?? Unicode တွေက NotoSansMyanmar နာမည်တွေနဲ့လာပါတယ် Padauk နာမည်တွေနဲ့လာပါတယ် . command နဲ့ရှာချင်ရင် adb shell &quot;cat /system/etc/fallback_fonts.xml |grep Myanmar&quot; adb shell &quot;cat /system/etc/fallback_fonts.xml |grep Padauk&quot; အဲ့နှစ်ကြောင်းရိုက်လိုက်ရင် Unicode နာမည်တွေကျလာပါလိမ့်မည် ။ တွေ့သမျှ Unicode နေရာတိုင်းမှာ zawgyi.ttf နဲ့ အစားထိုးရပါမယ် ။ ပုံမှာဆိုရင် NotosansMyanmar ၄ ဖိုင်တွေ့ပါတယ် ။ အဲ့ဒီ့ လေးဖိုင်လုံး နေရာမှာ အစားထိုးရပါမယ် ။ dd if=/data/local/tmp/zawgyi.ttf of=/system/fonts/NotoSansMyanmar-Regular.ttf dd if=/data/local/tmp/zawgyi.ttf of=/system/fonts/NotoSansMyanmar-Bold.ttf dd if=/data/local/tmp/zawgyi.ttf of=/system/fonts/NotoSansMyanmarUI-Regular.ttf dd if=/data/local/tmp/zawgyi.ttf of=/system/fonts/NotoSansMyanmarUI-Bold.ttf အဲ့လို ၄ နေရာလုံးမှာ အစားထိုးရပါမယ် ။ ဒါဆိုရင် Zawgyi ကို နေရာတိုင်းမှာ မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ် ။ Unicode ပါမပါ စစ်ကြည့်လို့ တစ်ခုမှ မပါလာဘူးဆိုရင် - Android Version ကို စစ်ပါ ။ Android Version 4.0 ရဲ့ အောက်ဆိုလျှင် DroidSansFallback.ttf မှာ အစားထိုးပါ ။ Android Version 4.0 နှင့်အထက် ဆိုလျှင် Roboto-Regular.ttf မှာ အစားထိုးပါ ။ (COC မြန်မာဖောင့်မြင်ချင်လျှင် Roboto-Regular.ttf မှာအစားထိုးပါ ။ Facebook ရဲ့ နာမည်တွေမှာ မြန်မာဖောင့်မြင်ချင်လျှင် Roboto-bold.ttf မှာ အစားထိုးပါ ။ ) Unicode စစ်တဲ့ command ရိုက်ရတာ အဆင်မပြေလျှင် Show_Myanmar_Font.bat ကို Download ချ ပြီး Run သုံးပါ ။
Description: Android 5.0 နှင့် အထက် ဖုန်းတွေ မြန်မာစာ မမှန်လို့ဆိုပြီး Message Box က တမျိုး Email ကတဖုံ မေးလာကြပါတယ်.... ဟုတ်ပါတယ်.... Samsung Lollipop 5.0 နှင့် အထက် ဖုန်းတွေမှာ Built-in Myanmar ( ZawGyi ) , Myanmar ( Unicode ) ဆိုပြီး ပါပေမဲ့... နေရာတိုင်း မမှန်သေးပါဘူး... တကယ်လို့ စာဖတ်သူက Root ဖေါက်တာ ၊ Recovery သွင်းရတာမျိုး မလုပ်ပဲ Facebook , Messager , Viber , WeChat , Line စတဲ့ Application တွေမှာ မြန်မာစာမှန်ရင် ပြီးရောဆိုရင်တော့ ဒီ Zawgyi One T5 Font လေးကို ဒေါင်းယူ Install လုပ်ပါ။ မရရင် ဒီမှာ ဒေါင်းပါ။
SNM Font Install for Lollipop_v5.apk
Huawei Y600-U151 Flashtool Firmware with Myanmar Font.zip
MM Aio Font Changer Pro (Beta).apk
Clash Of Clan Myanmar Font.apk
Huawei G520-0000 KMNJS000ZM-B205 MSM8225Q EPR EMMC whole font) .zip
COC Myanmar font V 1.2.zip
COC Myanmar Font.rar
Description: Indian Fonts package
MM AIo Font Changer Pro (Beta2).apk
Emotion UI Fonts Installer v1.2.apk
IdeaL Theme Original Fonts.zip
G730 Myanmar Font & Root By Phyo Chan.zip
Clash Of Clan Myanmar font.zip
G730U00 & Honor 3C Font Installer.zip
MM App Font Helper.apk
MM Aio Font Changer 1.0.apk
Default System Font.zip
lockscreen-text-changer-(Shabbir Jamaly-Cool jazz font).zip
တင်သူ Lashio Myanmar တင်ခဲ့ချိန် 1:22:00 PM